Buy Meizu mx6 (120,000Ks) in အင်းစိန် on ipivi.com
ရောင်းချသူ: San Linn
Sim. Dual sim 4G ooredoo 2ကဒ်ထည့်လို့ရ
Cpu. Deca core 10cpu
internal. 32 GB
camera. 12 MP and 5MP
အလုံး98%သန့်..အော်စည်း.စက်မဖွင့်ထား no error no demand errorအာမခံသည်
မှတ်ချက်..ပုံတွင်ပြထားပါသည် မှန်ထိပ်ထောင့်နား သေးသေးစင်ထားသည် မသိသာပါ..
ph.. 09 7854 75827
အမည်: Meizu mx6